SEO: Tredị 5 iji bulie Google Search Organic | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 13, 2017 Fraịde, Ọktọba 13, 2017 Douglas Karr
Ajuju m gbara na ihe omume abụọ m kwuru na mpaghara mpaghara bụ otu ụlọ ọrụ kwesịrị isi kewaa usoro mmefu ego ha maka mmetụ kachasị. Enweghị azịza dị mfe na nke a. Ọ chọrọ ka ụlọ ọrụ ghọta nghọta zuru oke nke ahịa ahịa ha dị ugbu a, na-aghọta otu ọwa ọ bụla si emetụta ibe ya, ma nwee ego maka ule na ihe ọhụụ na atụmatụ ha na-anabataghị.
Otú ọ dị, otu nlebara anya nke mmefu ego ọ bụla ga-anọgide na-abụ okporo ụzọ ọchụchọ engine. Rịba ama na ekwughị m search engine njikarịcha. A na-etinye okwu ahụ mgbe niile na akụrụngwa, mmepe mmepe, na usoro njikọ njikọta nke na-enweghịzi mmetụta ha na-emebu. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere onye ndụmọdụ SEO na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ gị na uche ha dị na mpaghara ndị ahụ na ọ bụghị n'omume obia, atumatu ọdịnaya, otutu ndi ozo, na owa ndi ozo… ichoro ohuru ndụmọdụ gbasara ịchọta ihe.
Mgbe ọ na-abịa search engine njikarịcha (SEO), naanị oge niile bụ mgbanwe. Agbanyeghị na ahụmịhe nke elu nke iji Google bụ isi ngwaahịa na-enwe mmetụta dị oke maka ndị na-eri ihe, ndị na-ere ahịa dijitalụ maara nke ọma na ntọala anaghị akwụsị agbanwe. Ma ọ bụ n'ihi mgbanwe nke omume n'ọma ahịa ma ọ bụ n'ihi tweaks na nke pụrụ ime ihe niile algọridim, ihe na-eme ka ibe dị mma na nyocha na-aga n'ihu. Mgbasa Ozi MDG
N'ezie, na mbido afọ a, 50% ka 90% dobe na okporo ụzọ ọchụchọ okporo ụzọ mgbe Google gbanwere saịtị ndị dị arọ na njikọta njikọ yana ọkụ na ọdịnaya! Ihe ndị dị elu metụtara ogo ogo Google bụ:
Ọnụ ọgụgụ nke ebe nrụọrụ weebụ
Oge na saịtị (ma ọ bụ oge obibi)
Peeji nke otu oge
Ọnụ ego bounce
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Google na-achọpụta ma saịtị gị ọ bụ ezigbo akụ ebe ndị ọbịa na-achọ ịnọ ma jiri ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ saịtị ahụ karịa maka ịrata ndị mmadụ na ọdịnaya na-emighị emi nke enweghị uru maka onye ọbịa. Google chọrọ ịnọgide na-achịkwa na ụlọ ọrụ ọchụchọ na ime nke a, ọ ghaghị ịkwado weebụsaịtị ndị dị elu, dị elu na nleta, na njigide. Ebe nrụọrụ weebụ gị kwesịrị ịbụ ihe ọmụma kachasị mkpa nke na-echebara ndị na-ege gị ntị ntị ma mee ka ha laghachi. Chee saịtị gị ka ọ bụrụ Ọbá akwụkwọ ọdịnaya.
Omume nke mgbasa ozi MDG na-akọwa ma na-akwado na ozi ha gụnyere:
Site àgwà dị mkpa ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Na omimi, na-ekere òkè content na-ebuli elu.
smartphones abụrụla ihe nyocha mbụ.
Nchọgharị na-aghọwanye ihe metụtara.
omenala SEO bu uzo ozo, ọ bụghị uru.
N'iburu usoro ndị a n'uche, olee otu ị ga - esi bulie ahịa dijitalụ gị maka nyocha ọchụchọ dị mma? Anyị na-arụ ọrụ na ọdịnaya anyị niile na mbenata ọnụ ọgụgụ nke isiokwu ndị yiri ya na saịtị ha ma na-edekwu ederede miri emi maka ndị ọbịa. Anyị na-eji eserese, ọdịyo, na vidiyo iji nyere aka mee ka ozi ederede anyị na-enye doo anya. Anyị na-ahụ na ọ dị mfe ịnweta ya na ekwentị mkpanaaka.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu, Nchọgharị Google na 2017: 5 SEO Trends to Watch:
Tags: mdzmdg mgbasa ozinyocha ọchụchọusoro ochicho chorousoro ọchụchọọnọdụ seo